National Democratic Front - NDF (Burma): (မဒတ). ၃၃ုကိမ်မြောက် တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့ စည်းခြင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
(မဒတ). ၃၃ုကိမ်မြောက် တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့ စည်းခြင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (မဒတ). ၃၃ ကြိမ်မြောက် တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းခြင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
တိုင်းရင်းသားအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများက မြန်မာပြည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့၏ အမျိုးသား တန်းတူညီမျှရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီကို အခြေခံသည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး စသည့်မွန်မြတ်သော ရည်ရွယ်ချက်များ ပြီးပြည့်စုံစေရန်အတွက် မဒတ တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကာ တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့သည်မှာ ယနေ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ၃၃ နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတော်လှန်ရေး ကာလအတွင်း အသက်သွေးချွေး၊ အိုးအိမ်စည်းစိမ်များစွာကို ပေးဆပ်ရင်းနှီးလှူဒါန်းခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအပေါင်းနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ၊ ရဲဘော် ရဲမေတို့အား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု - မဒတ မှ အစဉ် လေးစား ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် နိုင်ငံတကာအင်အားစုများက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမှတဆင့် ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းဖြင့် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန် အမျိုးမျိုး ဖိအားပေးတောင်းဆိုနေသော်လည်း မည်သို့မျှလက်ခံခြင်းမရှိသည့်အပြင် နအဖ စစ်အုပ်စုသည် အပြစ် မဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူများကို စစ်အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်း သတ်ဖြတ်နေခြင်း၊ နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် သပ်လျိုသွေးခွဲနေခြင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသား ချင်းစာနာသည့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သူများကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကာ ကြီးလေးသည့် ထောက်ဒဏ် များချမှတ်ခြင်း၊ နာဂစ် ဒုက္ခသည်များအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်း စသည့်လူသားမဆန်သည့် ပြစ်မှုတို့ကို ဆက်တိုက်ကျူးလွန်လျှက်ရှိနေပေသည်။
ပြည်သူတရပ်လုံးဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှ တဖက်သတ်ရေးဆွဲပြီး အဓမ္မအတည်ပြုခဲ့ သော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အခြေခံလျက် ၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပြီး ဖက်ဆစ်စစ်အာဏာရှင် စနစ်သက်ဆိုးရှည်ရန်အတွက် အတင်းအဓမ္မ ပြင်ဆင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေခြင်းကို မဒတ အနေနှင့် လုံးဝလက်ခံနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ဤကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းမှ ဖောက်ထွက်နိုင်ရန် အတွက် မဒတ အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သော သတ္တမအကြိမ်ညီလာခံကြီး တွင် ချမှတ်လမ်းညွန်ထားသည့်အတိုင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနှင့် စစ်အုပ်စု၏ ရွေး ကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတို့၏ ခုခံတော်လှန်စစ်ကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် လုပ်ဆောင်ကာ ပြတ်သားစွာ ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ၀င်သွားမည် ဖြစ်သည်။
နအဖ စစ်အုပ်မှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့် အဖွဲ့စည်းများနှင့်တွေ့ဆုံကာ အင်အားလျော့ချပြီး နယ်ခြား စောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် အမျိုးမျိုးအားပေးစည်းရုံးနေခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များအတွက် တိကျသော အခြေခံနိုင်ငံရေးအာမခံနိုင်မှုမရရှိသေးဘဲ၊ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများကို တဘက်လှည့်နည်းဖြင့် လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းသားဖြစ်၍ အထူးသတိချ ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ပြင် မကြာမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်. ရွေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း ကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အဖြေရှာသည့် ဖြစ်စဉ်တရပ်အဖြစ် မဒတ အနေနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ထောက်ခံသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှတ်တကယ်ဦးတည် သည့် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲ့မှုအတွက် တပြည်လုံးအတိုင်အတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုပြုလုပ်ရန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး၊ ခွန်ထွန်းဦး အပါအ၀င်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား ချွင်းချက်မရှိ လွတ်ပေးရန်၊ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သော နိုင်ငံရေး အင်အားစုများအားလုံးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မှုပြုလုပ်ရန် မဒတ အနေဖြင့် နအဖ စစ်အုပ်စုကို ဆက်လက် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကြီး အောင်သီးအောင်ပွင့်ရရှိသည်အထိ အခြား တော်လှုန်ရေးအင်အားစုများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် အတူ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တော်လှန် တိုက်ပွဲဝင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဓိဌာန်ပြုရင်း မဒတ တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၃၃ နှစ် ပြည့် နှစ်ပတ်လည် နေ့ တွင် အလေးအနက် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်။
ရက်စွဲ - ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၀)ရက်နေ့။
ဥက္ကဌ - (+၆၆) ၀၈၇ ၂၀၇ ၉၂၉၆၊
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး - (+၆၆) ၀၈၆ ၂၀၆ ၄၀၄၅၊
Posted by National Democratic Front - NDF at 6:21 PM